Nnwom 33 NA-TWI - Ayeyi Dwom - Mo a moyɛ atreneefo, nea - Bible Gateway
Nnwom 32Nnwom 34
Nnwom 33 Nkwa Asem (NA-TWI)
33 Mo a moyɛ atreneefo, nea Awurade ayɛ nti, monteɛm nni ahurusi; mo a mutie no, monkamfo no. 2 Monna Awurade ase wɔ asanku so na momfa asanku a nhama gu so nto nnwom mma no. 3 Monto dwom foforo mma no. Momfa nyansa mmɔ sanku no na monteɛm ahurusi so!